Mpamokatra sy mpamatsy CABLE GLANDS - Orinasa CABLE GLANDS China
Nylon Cable Gland (Metric / Pg / Npt / G kofehy)
Ho an'ny tadin'ny tariby nilona dia afaka manome anao fotsy fotsy (RAL7035), volondavenona (Pantone538), volondavenona (RA 7037), mainty (RAL9005), manga (RAL5012) ary ny hafa arak'izay ilainao.
Anti-vaky nylon Cable Gland (Metric / Pg / G thread)
Ny fihary hozatra dia ampiasaina amin'ny fametahana, fanamboarana, fiarovana ireo tariby amin'ny rano sy vovoka. Izy ireo dia ampiharina amin'ny sehatra toy ny board control, apparatuses, jiro, fitaovana mekanika, lamasinina, motera, tetikasa sns. Afaka manome anao fantsom-pifandraisana fotsy fotsy (RAL7035), volondavenona maivana (Pantone538), volondavenona (RA 7037) izahay ), mainty (RAL9005), manga (RAL5012) ary loko hafa arak'izay ilainao.
Ny fihary hozatra dia ampiasaina amin'ny fametahana, fanamboarana, fiarovana ireo tariby amin'ny rano sy vovoka. Izy ireo dia ampiharina betsaka amin'ny sehatra toy ny board control, apparatuses, jiro, fitaovana mekanika, lamasinina, motera, tetikasa sns. Afaka manome anao fantsom-pifandraisana fotsy fotsy (RAL7035), volondavenona maivana (Pantone538), volondavenona (RA 7037) izahay ), mainty (RAL9005), manga (RAL5012) ary ny fihodinan'ny tariby-porofo niokleary.